ဒလမြို့ တော်ကြီး စီမံကိန်း စတုတ္ထပိုင်း (ဆောင်းပါးရှင် ဒေါက်တာလှိုင်မြင့်) ~ ဒီမိုဝေယံ
ဒလမြို့ တော်ကြီး စီမံကိန်း စတုတ္ထပိုင်း (ဆောင်းပါးရှင် ဒေါက်တာလှိုင်မြင့်)
ဒလမြို့ တော်ကြီး စီမံကိန်း စတုတ္ထပိုင်း
ဒလမြို့တော်ရေးနေချိန် မိဘကျေးဇူးကို ရေးသားလိုစိတ် ပျင်းပြလာလို့ ရေးလိုက်မိပါတယ်။ တခါ အိမ်ပြောင်းတော့ အင်တာနက် အသစ်ပြန်လုပ်ရတာ တလနီးပါး စောင့်လိုက်ရတော့ ဒလ ဆောင်းပါးကကြားထဲမှာ အတော်လေး အဆက်ပြတ်သွားရတာကို နားလည် ပေးစေချင်ပါတယ်။ တခုတော့လဲ ၀မ်းသာရတာလေး သိရတာက ဒလမြေဈေးတွေ ထောင်တက်လာတာလေးပါ။ ထပ်တက်ပါဦးမယ်။ ဒလ မြို့သားများကို ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ လွယ်လွယ် မရောင်းကြပါနဲ့။ ဒလမြို့တော်ကို အစိုးရအနေနဲ့ အမြန်ဆုံးတည်နိုင်လေ နိုင်ငံတော်ထဲကို ရင်းနှိးမြုပ်နှံမှုတွေ ပိုဝင်လာပါမယ်။ နိုင်ငံတော်ကလဲ မြို့တော်သစ်တည်ဆောက်ရရင် ၀င်ငွေအများကြီးလဲ ရလာမယ် အလုပ်သမားအများကြီးကို အလုပ်ပေးလာနိုင်မယ်။ ဒလကိုကူးဖို့တံတားက ဒီနေ့လား၊ နက်ဖန်လား ဆုံးဖြတ်ချက် ချပေးရပါတော့မယ်။ အခုဖြစ်နေတာက မလုပ်သေးဘူး လုပ်မယ် ဆိုတာ မဟုတ်တော့ဘူး။ ဘယ်လိုပုံစံဆောက်မယ် ဘယ်သူ့ကိုချပေးရမလဲ စဉ်းစားနေရတဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ အဆင့်ကိုရောက်နေပါပြီ။ သိလှချေလားတော့ မမေးနဲ့။ အပိုင်သိလို့ ပြောနေတာပါ။
အဲဒီထက်အရေးကြီးတာက ရန်ကုန်မြို့မြေဈေးက နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေကို ကန်ထုတ်နေတဲ့ အကြောင်းရင်း တရပ်လဲဖြစ်တယ်။ ရန်ကုန်မှာ ရှိနေတဲ မြေဈေးက မြေရှားပါးမှုကြောင့် မြေဈေးက မတရားခေါင်ခိုက် နေတော့ နိုင်ငံခြားက လာရောက်ရင်းနှီးသူတွေ အတွက် စားရိတ်တွေ ပိုမိုကုန်ကျစေတော့ အရင်းအနှီးတွေကို ကန်ထုတ်နေရာ ရောက်နေပါတယ်။ လာရောက် ရင်းနှီးသူတိုင်းကို သိပ်ချမ်းသာသူတွေ မထင်ထားမိဖို့ လိုသလို ချမ်းသာသူဖြစ်ရရင်လဲ သူ့အတွက် တွက်ခြေ များများကိုက်မှ ရေရှည်ဈေးကွက် ယှဉ်ပြိုင်မှုမှာ အနိုင်ရနေဖို့ လိုနေပါတယ်။ ကိုယ့်ဆီလာရင်းနှီးတဲ့ သူကို အမဲဖျက်ဖို့ဆိုတဲ့ အမြင်မျိုးတွေ လုံးဝမထားမိဖို့ လိုပါတယ်။
ရှိတယ် လူအတော်များများမှာ အဲဒီလိုစိတ်ဓါတ်တွေဟာ မျိုးချစ်စိတ် ကင်းမဲ့ပြီး တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့ လောဘဆိုတာ မသိကြသူတွေ တပုံကြီးပါ။ ဥပမာ တက္ကစီကားသမား အနုပညာ မြန်မာ့ရိုးရာ အထည်ရောင်းသူတွေဟာ ကိုယ့်နိုင်ငံသားဆို ဈေးတစ်မျိုး ...ဧည့်နိုင်ငံခြားသား မြင်တာနဲ့ ဈေးတစ်မျိုး လုပ်ကြတာ ဗမာစိတ်ဓါတ် မဟုတ်ဖူးဆိုတာ ပြနေတာဆိုတာ မသိကြတာဘဲ.. ကျနော်တို့ ငယ်ငယ်ဘ၀ က မြန်မာတွေမှာ ဒီလို စကားနှစ်မျိုးပြောတတ်တဲ့ မြန်မာမရှိဖူး။ ရှိတယ် မြန်မာမဟုတ်သူတွေ။ မြန်မာဆိုရင် စကားတစ်ခွန်းဘဲ။ ဒါ မြန်မာတွေ ဂုဏ်ယူတတ်တဲ့ ဓလေ့စရိုက်။ အခုတော့ဘယ်မလဲ မြန်မာဆိုပြီး လက်မထောင်ပြစရာ စိတ်ဓါတ်။ အဲဒီစိတ်ဓါတ်ဟာ နယ်ချဲ့တွေနဲ့ ပါလာတဲ့လူတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်။ အဲဒီစိတ်ဓါတ်တွေ ဗိုလ်ချုပ်ကို လေးစားရင် ဗိုလ်ချုပ်ကို အဖေလို တန်ဖိုးထားသူမှန်ရင် ဖျောက်ကြပါ ပြုပြင်ကြပါလို့။ ကနေ့ကျနော်တို့ လွတ်လပ်ရေးကို သိပ်လိုချင်နေကြတယ်။ လွတ်လပ်ရေးကို လိုချင်ရင် လွတ်လပ်ရေးကို ရအောင်ယူပေးခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ် စိတ်ဓါတ်လေးတွေ ကိုယ်စီကိုယ်စီ မွေးကြပါ။ ဗိုလ်ချုပ်မိန့်ခွန်းကို ကိုးကားပြီး လွတ်လပ်ရေးကို လိုချင်ရင် လွတ်လပ်ရေးနဲ့ တန်တဲ့စိတ်ဓါတ်တွေ မွေးကြပါလို့။
တိုးရစ်တွေလာတယ်။ တိုးရစ်မြင်တာနဲ့တင် ဈေးတင်ပြီး ဆော်ဖို့ ကြံစည်တဲ့ စိတ်ဓါတ် ထားသူတွေကို ဖေါ်ထုတ်ကြပါ။ အဲဒီစိတ်ဓါတ်တွေကို တိုက်ဖျက်ကြဖို့ လူငယ်တွေ ကြံဆကြပါ။ အမျိုးသားရေး တာဝန်တရပ်လို့ သဘောထားကြပါ။ အဲဒီစိတ်ဓါတ်တွေ များပြားလာရင် လွန်ကဲလာရင် ၁၉၇၀ ခုနှစ်တွေက ချင်းတွင်းမြစ်မှာ မော်တော်မှောက်တယ်...အနီးကရွာတွေက လှေတွေနဲ့ ထွက်လာပြီး ရေနစ်နေသူတွေကို ဆယ်တင်ပြီး ပါလာတဲ့ ပစ္စည်းတွေကိုလုတယ် ပြီးလူကိုသတ်ပြီး ရေထဲပြန်ကန်ချတဲ့ အထိ လူစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ မုံရွာ-မန္တလေးကားလမ်းမှာ (ရွှေဘို-မုံရွာလမ်းခွဲ အနီးပေါ့) ကားလမ်းဘေး အမှိုက်နဲ့ ကောက်ရိုးမီးရှို့တယ်။ မိးခိုးနဲ့ အမြင်ကွယ်နေတော့ ကားတွေ ထိပ်တိုက် ဆော်ကုန်တယ်။ ရွာသားတွေ ထွက်လာပြီး လုကြတယ်။ ရွာနံမည်လေးကတော့ ချစ်စရာလေးရွာ ရွာရဲ့နံမည်နဲ့ လုပ်ရပ်က ပြောင်းပြန်။ အဲဒီလို အမဲဖျက်စိတ် မထားသူတွေကို ဦးစားပေး လမ်းညွှန်ပေးကြပါ။ တိုင်းပြည် တိုးတက်တာ တကယ်မြင်ချင်ကြရင် ကိုယ်တိုင်လဲ ပြုပြင်စရာတွေ အများကြီးလိုပါတယ်။ အစိုးရကိုချည်း ပုံချနေပြီး ကိုယ်လောဘတက် မဟုတ်တာ လုပ်တာကျတော့ မမြင်တတ်ကြဖူး။ ကျနော်တို့ ကိုယ်စီကိုယ်စီ အမြင်မှန်တွေ စီစစ်နေချိန်တန်ပါပြီ။
အမေရိကန်သမ္မတကြီး JOHN F. KENNEDY သမ္မတကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုတဲ့ပွဲ မှာ ပြောကြားခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာကျော်မိန့် ခွန်း ထဲကလို... ASK NOT, WHAT THE COUNTRY CAN DO FOR YOU , ASK WHAT YOU CAN DO FOR THE COUNTRY, FOR AMERICA TO LEADS THE WORLD. (ကမ္ဘာကို အမေရိကန် ဦးဆောင်ဖို့ ကိုယ့်အတွက် တိုင်းပြည်က ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲ မမေးကြပါနဲ့ တိုင်းပြည်အတွက် ငါဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရင်မေးကြပါ)။ ကျနော်တို့တတွေ အာဏာပိုင်တွေကတော့ အဓိကပေါ့လေ .မေးကြပါဦး။ တိုင်းပြည်အတွက် ငါဘာလုပ်ပေးမလဲ မမေးနိုင် သေးရင်တောင် တိုင်းပြည် မနာအောင် ငါဘာရှောင်ရမလဲ လောက်တော့ မေးကြပါဦး။ တိုင်းပြည်ဖျက်တဲ့အထဲ ငါမပါအောင်နေမယ် ဆိုတာလောက်တော့ မွေးကြပါဦး။
နောက်တခု အရေးကြီးတာက လက်ရှိ ရန်ကုန်က ကန်ထရိုက်တိုက်တွေက ငလျင်သာ နည်းနည်းလေး လှုပ်လိုက်ရင် လူကြားမကောင်းအောင် သေကြရပါမယ်။ အစိုးရအနေနဲ့ အဲဒီလို မဖြစ်ရလေအောင် ဒလဘက်ကို မြို့တော်အသစ် မြန်မြန်တည်ပေးပြီး ငလျင်ဒါဏ်လဲခံနိုင်တဲ့ အဆင့်မှီ တိုက်တွေကို construction code နဲ့အညီ ရှိမရှိ တိတိကျကျ စစ်ဆေးပေးမယ်ဆိုရင် ငလျှင်ဖြစ်ခဲသော် လူကြားမကောင်းအောင်အထိ မဖြစ်အောင် အခုကထည်းက စီမံချက်ချထားရပါတော့မယ်။ ဖြစ်ခဲ့ရင် ယခင်အစိုးရ လက်ထက်က ပြသနာက ယခုအစိုးရ ခေါင်းကိုလာခိုက်ပါမယ်။ ယခင်က လာဘ်စားတာက မတရားများထား အာဏာပိုင်ကို ပေးနိုင်ရင် အားလုံးပြီးစေ ဆိုတဲ့ခေတ်က ဆောက်ခဲ့တဲ့ တိုက်တွေဟာ CONSTRUCTION CODE ဆိုတာကလဲ မရှိသေးတော့ ဖြစ်ကတတ်ဆန်း ဆောက်ထား။ ဒီကြားထဲ ဘိလပ်မြေကလဲ ခိုးချင်တိုင်းခိုးထား ရောရောင်းချင်တိုင်း မတရားလောဘတွေနဲ့ လုပ်ထား ကန်ထရိုက်ကလဲ ချိုနိုင်သမျှချို ဆောက်ထား အဆိုးဆုံးကတော့ တိုက်ဆောက်ရာမှာ...
(၁) မြစ်ထဲက ကျောက်စရစ်နဲ့ ဆောက်ထားတာ အင်မတန် အန္တာရယ်ကြီးပါတယ်။ နိုင်ငံတိုင်းမှာ ကျောက်စရစ်နဲ့ ဆောက်ရင် ၂ထပ်တိုက်ထက် ပိုဆောက်ခွင့် မရှိပါဘူး။ ကျောက်စရစ်က မျက်နှာပြင် ချောမွေ့တော့ ဘိလပ်မြေမကပ်လို့ပါ။ အခုထွက်လာမဲ့ construction code မှာ ဒါကို အလေးထား ရေးထားလားတော့ မသိပါဘူး။
(၂) တခါ ရန်ကုန်မြစ်ပေါက်က သဲတွေက သဲအနုတွေ။ တခါ ဆားငန်ရည် ပါနေတော့ ဘိလပ်မြေကို ဆားပေါက်ပြီး ကြံ့ခိုင်မှုကို ကျစေထားပါတယ်။ တိုက်ဆောက်ရင် သဲအကြမ်းကို သုံးရသလို ဆားဓါတ်ပါလို့ မရပါဘူး။ တခြားမကြည့်ပါနဲ့။ အရေးအခင်း ဖြစ်ခါနီးလေးမှာ ရန်ကုန်လေယာဉ်ကွင်းကို ဂျပန်နိုင်ငံက Taisei ဆိုတဲ့ကုမ္မဏီက တိုးချဲ့ဖို့ ကန်ထရိုက်ရတော့ လေယာဉ်ပြေးလမ်း ခင်းတဲ့သဲက ပဲခူး အလွန်ပျဉ်ပုံကြီးက သဲအကြမ်းတွေကိုဘဲ ယူပါတယ်။ ဒါမြေကြီးပေါ်မှာ တည်ခင်းတဲ့ လေယဉ်ပြေးလမ်းနော်။ ကျနော်တို့က ကွန်ဒိုကြီးတွေ ချနေကြတာ ဘယ်လောက် အန္တရယ်ကြီးသလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ကြပါ။
နောက်တချက် အခု TRADER'S HOTEL ဆောက်သူတွေ သူတို့လဲ သဲကောင်းသုံးထားတယ်။ ကျောက်ကိုလဲ ကျောက်စရစ်ကို လုံးဝ မသုံးဖူး။ ဘီလင်းကျောက်ကိုဘဲ သုံးထားတာကိုသာ စဉ်းစားကြည့်ကြပါ။ ဟော်တယ်ဆိုတာ ဆောက်တဲ့ ထုထည်ကလဲ ခိုင်ခိုင်မာမာ ကျောက်နဲ့ သဲကအစ CONSTRUCTION CODE နဲ့အညီ လုပ်ထားတော့ ကျနော်တို့ ကွန်ဒိုတွေ တွေးသာ ကြည့်ကြပေတော့။ ဒါတောင် ထရိတ်ဒါးဟော်တယ်က အနစ်-၃၀-ပြည့်ရင် အစိုးရကို ပြန်အပ်ရမှာနော်။ အဲဒါကိုတောင် စံနစ်တကျ ဆောက်ကြတာဆိုတော့။ ကျနော့်သမီး ရန်ကုန်မှာ ကွန်ဒိုမှာ ငှားနေမှာကို ကျနော် ရအောင်တားတယ်။
အဲဒီင်္တော့ ကန်ထရိုက် တိုက်တွေကိုဆို ကျနော် စကားထဲထဲ့ မပြောစရာ မလိုတော့ဘူး။ မပြောချင်တော့ဖူး။ သမ္မတကြီး အမျှော်အမြင်နည်းရင် ငလျင်သာ လှုပ်လိုက်လို့ ကတော့ သူ့ခေါင်းပေါ် လာပုံပါမယ်။ အဲဒါကိုကြိုကန်ထားဖို့ ဒလဘက်မှာ CONSTRUCTION CODE နဲ့မညီတာတွေကို ကြပ်ကြပ်မတ်မတ်လုပ်ပေးလိုက်ရင် လူထုလဲ အသိတိုးလာမယ်။ ကန်ထရိုက်တွေလဲ ပြုပြင်လာပါမယ်။ ပိုအရေးကြီးတာက အခုနိုင်ငံတကာက နိုင်ငံခြားရင်းနှီး မြုပ်နှံမှုတွေ အများကြီး ၀င်လာပါတော့မယ်။ နိုင်ငံခြားသားတွေလဲ အများကြီး လာနေပါတော့မယ်။ ငလျှင်လှုပ်ရင် ယခင်ကလို ဖုံးဖိထားလို့ မရတော့သလို နိုင်ငံခြားသားတွေ သေရင် မုန့်ဖိုး ပဲဖိုးလေးနဲ့ ပြီးမယ်မထင်ပါနဲ့။ ကောင်းပြီ လျှော်လိုက်.. လျော်ရင် ကျုပ်တို့ မြန်မာတွေ သေတာပါလျော်ဖို့ တန်းတူထားလျော်ဖို့ လျော်ရမယ်ဆိုတာပါ တွေးထားဖို့ လိုနေပါတယ်။
တခါ ဒလဘက်မှာ ငလျှင်ဒါဏ်ခံနိုင်တဲ့ တိုက်ကြီးတွေ ဆောက်လိုက်ရင် အဲဒီမှာ ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ ငလျှင်နဲ့ ပိပြီးမသေချင်ရင် ဒလဘက်က စိတ်ချရတယ် ဖြစ်လာမယ်။ ငလျှင်ပိပြီး လဒစာ အဖြစ်မခံချင်ရင် ဒလ ဘက်ကိုလာ ဖြစ်လာပြန်ဦးမယ်။ ဒလ ဒလ။ ရန်ကုန်ကို ဒလက ချန်ခဲ့ပါတော့မယ်။ ငလျှင်လှုပ်လိုက်ရင် ရန်ကုန်ဟာ လူအများကြီး သေထားတဲ့ သူရဲခြောက်တဲ့ မြို့ကြီးဖြစ်သွားပြီး ဈေးတွေ အများကြီး ထိုးကျသွားပါမယ်။ (ရန်ကုန်မြို့နဲ့ ငလျင် ဖတ်ချင်ရင်) ငလျှင်လှုပ်ပြီး ကျန်ခဲ့တဲ့ တိုက်တွေကိုလဲ အစိုးရက ဖျက်ခိုင်းတာနဲ့ ကြုံရပါမယ်။ အဲဒီလိုကြိုမြင်ထားကြပါ။ ကြိုမြင်တတ်ကြပါစေ။ ကျနော်တို့ တတွေ အများကြီး ကြိုကြိုတင်တင် တွေးဆ ထားသင့်ပါတယ်။ ဒလမြို့တော်ကြီးက စလုပ်တော့မယ်။ သံသယ မရှိတော့နဲ့။ လုပ်ပြီဆိုတာနဲ့ ရန်ကုန်မြေဈေးက တစတစ ထိုးကျလာမယ်။ နောင် များများမဟုတ် ၅-နစ်မှာ ဘယ်လောက်အထိ ကျသွားနိုင်တယ်။ ဒလဘက်က ဘယ်လောက်အထိ တက်လာနိုင်တယ် ဆိုတာလဲ စဉ်းစားထားကြပါ။
ငလျှင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တဦးက ငလျှင်အကြောင်း ရေးပါဦး ပြောလာပါတယ်။ ငလျှင်က ဂျပန်က ငလျှင်အများကြီး လှုပ်တဲ့ ဒီတိုင်းပြည်မှာကို ပညာရှင်တွေ သုသေသန တွေအများကြီး လုပ်ထားကြပေမဲ့ သိပ်ခန့်မှန်းဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။ မြန်မာပြည်အတွက်တော့ Longman Atlas မြေပုံ ၀က်ဆိုဒ်က မြေငလျှင် ခြေပြ ငလျှင် ဖြစ်စေတဲ့ Plates ပြထားတာလေးဘဲ တင်ပြလိုပါတယ်။ တကယ်တော့ မြန်မာပြည် ဟာ ငလျှင်ကျောပေါ် တည့်တည့်ထိုင်ထားတဲ့ တိုင်းပြည်ဖြစ်နေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဧရာဝတီမြစ်ဆုံဒေသဟာ ငလျှင် ကျောက်ဖျာ ဒေါင့်ကွေးနေရာမှာ ရှိနေတော့ လှုပ်နိုင်ခြေများတယ် လှုပ်ရင်လဲ ပြင်းထန်တတ်တဲ့ နေရာပေါ်မှာ ရှိနေပါတယ်။ သမ္မတကြီး ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို ရပ်ပေးလိုက်တာ အင်မတန် ကျေးဇူးကြီး လှပါပေတယ်။ အင်မတန် ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ မြေနေရာပေါ်မှာ ရှိနေတာပါ။
တခါ ဆောင်းပါးအစပိုင်းမှာ ရေးထားသလို စက်မှုလုပ်ငန်းတွေဟာ ဒလ ဘက်ကိုလာမလား လဒစာ အဖြစ်ခံမလား ၂ခုဘဲရှိတယ် ဆိုတော့ လုပ်ငန်းအားလုံးနီးပါး ဒလဘက်ကို ရောက်လာပါမယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်လာမှာကို အစိုးရက မြို့တော်စီမံကိန်းကို ပညာရှင်တွေနဲ့ နောင်..၁၅- ၂၅ နှစ်မှာ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အနေအထားကို ကြိုတင်မှန်းဆ တွက်ချက် ရေးဆွဲရပါမယ်။ မြောက်ကိုးရီးယား မဟာခေါင်းဆောင်ကြီးတွေလို ON THE SPOT GUIDANCE တွေ မလုပ်မိကြဖို့ လိုပါတယ်။ ဒဂုံမြို့သစ်တည်သလို လက်ညိုးညွှန်ရာ ရေထွက် မလုပ်မိကြဖို့ လိုပါတယ်။
အစိုးရဟာ အခုကထည်းကိုက စီမံကိန်းဌာနကို တိုးချဲ့ထားသင့်ပါပြီ။ စီမံကိန်းဌာနရဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေကို သေသေချာချာ လေ့လာ။ လက်ခံနိုင်တာ လက်ခံပေါ့။ လက်မံခံနိုင်တာရှိရင် အကျိုးကြောင်းသင့် ပြန်ပယ်ချသင့်ပါတယ်။ ငါကအာဏာပိုင်ဆိုတဲ့ စရိုက်တွေနဲ့ ခေတ်မှီနိုင်ငံတော်ကြီးကို မရောက်နိုင်ပါဘူး။ ခေတ်မှီနိုင်ငံတော်ကြီး ဖြစ်ဖို့က ဦးဆောင်သူကိုယ်တိုင် ခေတ်မှီအတွေးအခေါ် မရှိဘဲ ဘယ်တော့မှ မရနိုင်ပါဘူး။ နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် စစ်ရေးအမြင်ရှိရမည် ဆိုတာမျိုးနဲ့ ခေတ်မှီနိုင်ငံတော် ဆိုတာ တခြားစီပါ။ ခေတ်မှီနိုင်ငံတော်ကြီး တည်ဆောက်ဖို့ဆိုတာ စစ်ရေးအမြင် တခုထည်းနဲ့ တည်ဆောက်လို့ မရပါဘူး။ စစ်ရေးအမြင် အားသန်သူဆိုရင် ရှိသမျှ ဘဏ္ဍာငွေက တင့်ကားတွေ ဒုံကျည်တွေဘဲ အဓိက ဦးစားပေးလုပ်ခဲ့တာ မျက်မြင်ပါဘဲ။ အဲဒါတွေက တည်ဆောက်တဲ့ အရာတွေမဟုတ် သူတို့က ဖျက်ဖို့ သက်သက် ဖျက်ဖို့ ။
တခါ အစိုးရက ဒလမြို့ အတွင်းပိုင်းကျတဲ့ နေရာတွေမှာ ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီကြီးတွေကို ကန်ထရိုက် တိုက်ခန်းကြီးတွေ ဆောက်ခိုင်းရပါမယ်။ ဟိုနားအိမ်တလုံး ဒီကတလုံး ဆိုတာမျိုး မဖြစ်သင့်တော့ပါ။ အားလုံးဟာ မကြာခင် ဘန်ကောက်မြို့တော်ကြီး၊ ဆစ်ဒနီမြို့တော်ကြီးလို ဖြစ်လာဖို့ ကြိုတင် စီမံချက် ဆွဲထားရပါမယ်။ လမ်းတွေကအစ တချိန်မှာ ဘယ်လောက် ကျယ်ရမယ်ဆို သိပ်စဉ်းစား နေစရာမလိုပါဘူး။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ မြို့ တော်ကို ပုံစံနမူနာယူလို့ ရနေပါပြီ ။
ဒိနေရာမှာ လူကြီးတွေက စင်ကာပူကိုနမူနာ ယူဖို့စိတ်ကူးနေကြတာ နည်းနည်တော့ ဘ၀င်မကျပါဘူး။ စင်ကာပူဟာ မြေရှားပါးလို့ သူတို့ကို နမူနာမယူသင့်ပါ။ တကယ်ယူသင့်တာက ဆစ်ဒနီပါ။ မြေအကျယ်ကြီးမှာ တချိန် လူတွေ၊ စိတ်အင်အား၊ စိတ်ခွန်အား၊ သာယာကောင်းမွန်မှုကို အထောက်အပံ့ ပေးနိုင်တာကို ထဲ့တွက်သင့်ပါတယ်။ ဆစ်ဒနီကို နမူနာယူရင်တော့ ကွမ်းခြံကုန်း လက်ခုပ်ကုန်းတွေဟာ မြို့အစွန်အဖျား ဖြစ်သွားပါမယ်။ အဲဒီလို စံနစ်တကျ စီမံချက်ချပြီး ဆောက်လိုက်ရင် ၁၀-နှစ်နေချိန်မှာ ရန်ကုန်မြို့တော်ကြီးက တိုက်တွေက ကြာလေဆွေး ရွလာလေ တွက်ချက်ကြည့်ပေတော့။ ဘယ်ဟာက နံပတ်တစ်မြို့တော် ဖြစ်သွားမလဲ ဆိုတာပါ။ ကြိုကြိုတင်တင် တွက်ချက်ပြီး ခြေလှမ်းသွက်သွက် လှမ်းကြပါလို့။
တခါ ဆောက်လုပ်တဲ့ ကန်ထရိုက်တိုက်ကြီးတွေမှာ နောင်မကြာခင်လူတွေရဲ့ ကားပိုင်ဆိုင်မှု တိုးတက်လာမှာမို့ အခန်းဘယ်နှစ်ခုဆောက်ရင် ကားပါကင် ဘယ်မျှရှိရမယ်ဆိုတဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေ ချမှတ်ထားရပါမယ်။ လမ်းပေါ်ရပ်တာကို မီတာစံနစ်နဲ့ ဈေးကြီးကြီး ကောက်ရပါမယ်။ အခုလို ကြံ့ဖွတ်အဖွဲ့ဝင်တွေ လုပ်စားစေ၊ စံနစ်ထားမယ်ဆိုရင် ခေတ်မှီဆိုတဲ့ စကားမသုံးပါနဲ့။ ရှက်ဖို့ သိပ်ကောင်းပါတယ်။
ဆောက်တဲ့ တိုက်ခန်းမှာလဲ သြစတေးလျ မှာဆိုရင် တိုက်တခုဆောက်ရင် လှေကားအကျယ်က ဘယ်လောက်ထားရမယ် ဆိုတာ သတ်မှတ်ချက် ချထားပါတယ် ။ ရန်ကုန်လို လှေကားကို ကျဉ်းကျဉ်းလေး ဆောက်လို့ မရပါဘူး။ နောက်ဆုံး လှေကားထစ်ကိုတောင် ..အမြင့်ဘယ်လောက် တထစ်ချင်းရဲ့ အကျယ်ဘယ်လောက် ဆိုတာ တနိုင်ငံလုံးမှာ (စံ) တစ်ခုထည်းထားပါတယ်။ အားလုံးဟာ တပုံစံထဲပါ။ သူတို့က အဲဒီလောက်အထိ သတ်မှတ်ချက်တွေ ချထားတာပါ။ ဒါခေါင်းဆောင်တစ်ဦးရဲ့ အမျှော်အမြင်ပေါ် မူတည်တာပါ။
ရန်ကုန်လေဆိပ် ပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်း ခရီးသည်များ အဆောင် (ဓာတ်ပုံ ဒီမိုဝေယံ)
နောက် တခါ နိုင်ငံတကာနဲ့ အဆင့်အတန်းမှီတဲ့ လေယာဉ်ကွင်းကလဲ ရန်ကုန်မှာ ဆောက်လို့ မရနိုင်တော့ပါဘူး။ ဒလဘက်မှာ(ဘဲ) ဆောက်လို့ရပါမယ်။ ဘယ်နေရာ ဆောက်မယ်ဆိုတာတော့ မသိဖူး။ ပညာရှင်တွေ ဆုံးဖြတ်ရမဲ့ကိစ္စပါ။ ရီစရာလေးတွေးမိလို့ပါ။ ဟိုအောက်ကွမ်းခြံကုန်း ဖက်များ ရောက်သွား မလားလို့ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဂျက်/ကွမ်းခြံကုန်း ဆိုပြီးရှိထားတော့ ဂျက်လေယဉ်ကြီးတွေ ကွမ်းခြံကုန်းမှာ ဆင်းမယ်ဆိုပြီး နိမိတ်များလားလို့ပါ။ ရန်ကုန်လေယာဉ်ကွင်းက အဲယားဘတ်စ် အလတ်စား (ခရီးသည်-၂၅၀-) တွေတောင် ဆင်းရင် ဘရိတ်ဖမ်းနေရတာ။ ခေတ်မမှီတော့တဲ့ ဘိုးရင်း-၇၄၇ တွေတောင် မဆင်းနိုင်ဘူ။ အခု ခေတ်စားနေတဲ့ အဲယားဘတစ်- A-380 လို လေယာဉ်ကြီးတွေကတော့ ဝေလာဝေးပါ။ ဒလဘက်ရောက်မှ လေယဉ်ပြေးလမ်း.. ပေ-၁၅၀၀၀- နှစ်လမ်းနဲ့ လေလမ်းကြောင်း ပြောင်းတဲ့အချိန် ဆင်းနိုင်မဲ့ ကန့်လန့်ဖြတ် လေယာဉ်ပြေးလမ်းတခု ဆိုတာမျိုး လုပ်နိုင်တာ ဒလ ဘက်မှာသာ ရှိတာပါခင်ဗျာ။ ရန်ကုန်ကွင်းက ၁၉၅၉-နစ်က ဆောက်ခဲ့တဲ့ကွင်း အခုခေတ် လေယဉ်ကြီးတွေနဲ့ မနိုင်တော့ပါဘူး။ ထပ်တိုးချဲ့ဖို့လဲ မြေကုန်နေပါပြီ။
ယနေ့အထိ မရိုးနိုင်သေးတဲ့ ရန်ကုန်လေဆိပ်မှ ကတ္တားချိန်စက် (ဓာတ်ပုံ ဒီမိုဝေယံ)
တကယ်တော့ လေယဉ်ကွင်းဟာ မြို့တော်ဟောင်း ရန်ကုန်နဲ့လဲ မဝေးသင့် တဖက်ကမ်းက သံလျှင်နဲ့လဲ မဝေးအောင် စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ တဆက်ထဲ တကယ် နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီဖြစ်လာရင် ၂၄-နာရီ လေယာဉ်ကြီးတွေ ဆင်းတက်နေကြတော့ ကျနော့် အမြင်အရဆိုရင်တော့.. မြို့အလယ်ခေါင် မဖြစ်အောင်လဲ စဉ်းစားဖို့ လိုနေပြန်ပါတယ်။ ကျနော် သဘောအရ ကိုယ်ပိုင် တွက်ဆချက်ပါ ယခု ရန်ကုန် သံလျှက်စွန်းနဲ့ မျက်နာချင်းဆိုင်.. နေရာဆိုရင် လေယာဉ် ချဉ်းကပ်လမ်းဟာ မြစ်အပေါ်မှာ ရှိနေတော့ လေယဉ်အသံ အနှောက်အယှက် နည်းမယ်လို့ ယူဆမိတာပါ။
နောက် တနေရာကတော့ သီလ၀ါ ဆိပ်ကမ်းနဲ့ မျက်နာချင်းဆိုင် နေရာပါဘဲ။ မြစ်အကွေးနေရာမှာဆိုတော့. သုံးဘက် သုံးတန်က လူနေအိမ် တွေအပေါ်ဖြတ်နေတာ မဟုတ်တော့လို့ပါ။ တဘက်ကလဲ သီလ၀ါဆိပ်ကမ်း ဆိုတော့ အိမ်ယာတွေ မရှိဘူး။ လေယာဉ်တွေက ဆင်းရင် အများစုက လေလမ်းကြောင်းအရ သီလ၀ါဘက်ကနေ ချဉ်းကပ်လာရမှာ ..ပြန်တက်တာကတော့ ဒီဘက်ပဲ ရှိနေမှာပါ။
တတိယ နေရာကတော့ အောက်ဆုံးက ရန်ကုန်မြစ်ပေါက်က သောင်ကုန်းရွာနားမှာပါ။ ပင်လယ်ပေါက်နဲ့ နီးတော့နေတယ်။ လေယာဉ်ပြေးလမ်းနဲ့ ချဉ်းကပ်လမ်းက လူနေအိမ်တွေနဲ့ လုံးဝ ရှင်းလင်းနေပါတယ်။ မြေသားထုတော့ ခိုင်မာအောင်လုပ်ပေးဖို့တော့ လိုတဲ့နေရာပါ။ လေယာဉ်ကြီးတွေအတွက် စိတ်အကြိုက်ဆုံး နေရာပေါ့။ မိုးရွာရင်တော့ ဒုက္ခများမဲ့နေရာပါ။ ပညာရှင်တွေ စဉ်းစားကြရမှာပါ။ ကျနော်ပညာရှင်မဟုတ်ပါ။ မိမိအမြင်တင်ပြချင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်..။
ဆက်လက် ရေးသားပါဦးမည် ။
ဒလမြို့ တော်ကြီး စီမံကိန်း တတိယပိုင်း ပြန်ဖတ်လိုလျှင်